၂၀၁၂ လယ်ယာမြေဥပဒေပြင်ဆင်ရေး တောင်သူများက လွှတ်တော်တွင် အချက်ငါးချက် တောင်းဆိုမည်ဟုဆို
၂၀၁၂ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အချက်ငါး ချက်ကို တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၁၄ ခုရှိ တောင်သူများက လွှတ်တော်သို့ တင်ပြတောင်းဆိုမည် ဖြစ် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လယ်ယာမြေဥပဒေပြင်ဆင် ရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဩဂုတ် ၈ နှင့် ၉ ရက်များတွင် မန္တလေးမြို့ Hotel Mandalay ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အချက်ငါးချက် တောင်းဆိုရန် သဘောတူညီမှု ရရှိကြောင်း ပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင့်လွင်က ပြောသည်။
လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ တောင်းဆိုမည့် အချက်ငါးချက် တွင် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာကိစ္စ များ၊ သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေ များ၌ တောင်သူများအပေါ် နစ်နာကြေးပေးချေရမည့် ကိစ္စများ၊ တောင်သူလယ်သမားဆိုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ၊ လယ်...............အပြည့်အစုံသို့
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့ အနေအထားမှာ ဌာနေ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတွေ ချိုးဖောက်ခံနေရဆဲပဲလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများကွန်ရက် အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် နော်အိအိမင်းက ပြောပါတယ်။
ဩဂုတ် ၉ ရက်မှာ ကျရောက်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနေ့မှာ ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပြီး ဌာနေတိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ခံစားရဖို့ အရေးကြီးနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။...........အပြည့်အစုံသို့
ဘိုးဘွားပိုင်လယ်မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု ဂရန်အမည်ပေါက်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်လိုကြောင်း တောင်သူများဆို
ပေါင်မြို့နယ်၊ ထန်းပင်ချောင်ကြီးကျေးရွာတွင် ဆားကွင်းတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် သိမ်းဆည်း ခဲ့သော ၅၃၅ ဧကအား ပြန်လည်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပေးရာ၌ လုပ်ငန်းခွင် ဟန့်တားမှုများရှိနေ၍ ပိုင်ဆိုင်မှု ဂရန်အမည် ပေါက်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်လိုကြောင်း ဇူလိုင်၃၁ ရက်နေ့တွင် တောင်သူများက ဟင်္သာမီဒီယာကို ပြောသည်။
“ ဘိုးဘွားပိုင်လယ်ကို ပြန်ပေးစဉ်အခါတုန်းက နိုင်ငံတော်ကနေ လက်ရောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဒီနေ့ချိန်ထိ ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ........အပြည့်အစုံသို့
ဖမ်းဆီးခံကချင်လယ်သမားပြန်လွှတ်ပေးဖို့ စစ်တပ်ကို လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေ တောင်းဆို
မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ ကချင်လယ်သမားတဦး အချိန် တလကျော်ကြာလာတဲ့အထိ ဘာသတင်းမှစုံစမ်းလို့ မရပဲ ပျောက်ဆုံးနေလို့ သူ့ကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ကချင်အဖွဲ့အစည်းတွေက တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လယ်သမားရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက အာဏာပိုင်တွေကို အသိပေးတိုင်ကြားထားပေမဲ့လည်း ဘာမှ အကြောင်းမပြန် ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကိုကျော်အောင်လွင်က ဆက်ပြီးပြောပြပါလိမ့်မယ်။
ကချင်ပြည်နယ် ကာမိုင်းဒေသ အရှေ့ဘက်လီဒိုလမ်းမပေါ်မှာ ကချင်လယ်သမား အင်လမ်းဘောက်နော်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ ၂ဝရက်နေ့က မြန်မာစစ်တပ်က ..........အပြည့်အစုံသို့
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး
ယနေ့မြန်မာ (Burma Today)
လွတ်လပ်တဲ့ အာရှ အသံ
ရှမ်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးမွတ္တမ္း
Karen People Forum (by KORD)
အာဏာရှင်များ၊ စီးပွားရေးသမားများနှင့် ကျားများ
ကချင် “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” မှ ကြုံတွေ့ရသော သင်ခန်းစာများ
Copyright © 2017 ECDF Burma. All Rights Reserved. Designed by JoomlArt.com.